AfricArXiv wuxuu noqday 2 - AfricanArXiv
AfricArXiv wuxuu noqday 2
Published by Fayza Ciid Ciid Mohammad on 26th Juun 2020 26th Juun 2020
Waxaan si farxad leh ugu dabaaldegnay 2nd sanad guurada AfricanArXiv bishii Juun 2020. AfricanArXiv wuxuu laba sano jirsaday isagoo u adeegaya sidii astaan ​​hore oo loogu talagalay shaqada cilmi baarista ee ku saabsan mowduucyada Afrika ee ay sameeyeen cilmi baarayaasha Afrikaanka iyo kuwa aan Afrikaanka ahayn. Waxaa la bilaabay bishii Juun 2018 iyada oo ujeeddadu tahay kor u qaadista iyo taageerista sayniska furan iyo daabacaadda daabacaadda ee Afrika si loo kobciyo iskaashiga cilmi-baarista ee ka dhexeeya saynisyahannada Afrikaanka, lagu dhiirrigeliyo iskaashiga caalamiga ah iyo kor u qaadista aragtida wax soo saarka cilmi baarista Afrika.
“AfricanArxiv waxay jirsatay laba jir Juun 25-keedii. Waxay ahayd taarikhdan maanta ah ee 2018 in aan daabacno war-saxaafadeedka lagu soo bandhigayo hindisaha (https://www.cos.io/about/news/center-open-science-and-africarxiv-launch-branded-preprint-service).
Labadan sano waxay ii ahaayeen khibrad cajiib ah, waana ku faraxsanahay inaan arko dhammaan wixii ilaa hadda la qabtay.
Runtii waxaan rabaa inaan idhaahdo mahadsanid qof kasta oo ku taageeray dadaalkan si kasta illaa bilowgii.
Iyo inaan u hambalyeeyo kooxda cajiibka ah ee suura gal ka dhigtay tan. Kuwii halkaas joogey bilowgii, kuwii halkaas joogay bilowgii oo aan halkaas sii joogin, waa kuwii ku soo biiray kooxda mar dambe. Aad baad u mahadsan tihiin!
Weli waxaa jira caqabado badan oo ku saabsan dimuqraadiyaynta iyo faafinta daabacaadda iyo sayniska furan ee Afrika, waxaana ku qanacsanahay in AfricanArxiv door muhiim ah ka ciyaari doonto arrintan.
Sannad guurada labaad ee farxadda leh ee AfrikaArxiv ”
- Justin Sègbédji Ahinon, Xiriiriyaha aasaasaha AfrikaArXiv
Categories:	Furan Furan
Categories Select Category Awood dhisid (1) Wadashaqeynta (12) CVEID-19 (30) Dhacdadii (3) Guud (10) Qalabka (1) Aqoonta asaliga ah (1) Kala duwanaanta Luqadda (4) Marin u furan (22) Sayniska Furan (13) Dib u eegista Asxaabta (3) Diyaargarow (7) Daabacaadda (11) Isgaarsiinta Sayniska (15) Soo gudbinta (5)
Khudaarta asaliga ah ee Afrikaanka ah AfricanResearch ASAPbio Berlin BlackLivesMatter BlackVoicesMatter Xarunta Sayniska Furan chatbot shirka Covid-19 Crastina Wadahadalka Baadhista Edinburgh Ammaanka Cuntada FORCE11 FORCE2019 IGDORE Joy Owango afka kala duwanaanta luqadda hababka Jaamacadda Islaamiga ee Omdurman marin furan Journals Furan Fur Khariidadaha Aqoonta sayniska furan Shirka Sayniska Furan osc2018 iskaashi Pearl Ihuoma Osirike Dib-u-eegidda Aragga daabacaadda Dib u eegis daabacaadda PubPub dib u eegis deg deg ah Dib-u-dejinta Isgaarsiinta Sayniska ScienceOpen cilmiga bulshada Sudan Himilooyinka Horumarka Sare TCC Africa ubushakashatsi
Helitaanka Macluumaadka Cilmi-baarista ee Afrika
Inta lagu gudajiro taxanaha blogka dhijitaalka ah ee cilmi baarista la xiriirta SDG, xubin ka tirsan la-taliyaheena Joy Owango ayaa ka qortay SDG 4, Tayada waxbarashada.
Wax ka qabashada Wax-qorista Sayniska ee Afrikada iyada oo loo maro Furan
Helitaan furan (OA) waa aasaaska mabaadii'da iyo dhaqammo fara badan oo natiijooyinka cilmi-baarista loogu qaybinayo internetka, lacag la'aan ama caqabadaha kale ee marin-u-helka ah. AfricanArXiv iyo Shabakadda Akhrinta Akhriska Afrikaba (ASLN) Akhri wax dheeraad ah…
Waxaan u taaganahay midnimo wada noolaanshaha jaaliyadaha Madow ee ku nool Mareykanka - #BlackLivesMatter AfricArXiv ayaa u jirta in wax laga qabto caqabadaha hay'ad iyo nidaam iyo eex ee nidaamka daabacaadda aqooneed ee aqoonta si loo siiyo Afrikaanka. Akhri wax dheeraad ah…
Praesent mi, eget vel, ultricies neque. fringilla ut